Ummeli We-Dispute Litigators Lawyer ePeoria, Illinois | Thomas Howard
Izinkontileka Zesiphikiso Senkontileka
I-Canannis Dispute Litigators
Kunoma yiliphi ibhizinisi, isivumelwano sisebenza kuphela lapho wonke amaqembu angavumelana ngemigomo nemibandela yawo. Uma kwenzeka kuba nokungaboni ngaso linye, futhi iqembu elilodwa lephula isivumelwano, bese kuba nengxabano yesivumelwano. Izingxabano zenkontileka yeCannabis, njengezinye izingxabano, zingalungiswa ngaphakathi nangaphandle kwenkantolo.
Izinhlobo zenkontileka Ukuqhekeka
Lolu hlobo lokuphula umthetho luphakama lapho iqembu elilodwa lingalethi njengoba lithembisile. Esimweni esinjalo, othintana naye akanakulungiswa, futhi lowo othintekile angakhetha ukumangalela iqembu elingazange lihloniphe ingxenye yalo yezindleko.
Uma iqembu elithintekile liwina, enye ingxenye ikhokhela umonakalo. Amaqembu nawo anganquma ukuhlela izinto ngaphandle kwenkantolo ngosizo lommeli onekhono. Amanye amakhambi okwephulwa kwenkontileka afaka ukusebenza okuthile, nokwesulwa nokubuyiselwa.
Ngaphandle kwalokho okwaziwa njengokuphula umthetho ongabonakali, lolu hlobo lokuphula umthetho aluphuli umongo wesivumelwano okusho ukuthi isivumelwano sisasebenza. Noma isivumelwano singashintshi, iqembu elingakaze lephule inkontileka lisengabopha amacala.
Umkhakha we-cannabis ulawulwa kakhulu, futhi ngoba umthetho uqhubeka nokuvela, kuyinto ejwayelekile ukuthi abaninimabhizinisi embonini bazithole sebexabene. Yilapho kungena ama-canigab contractors we-cannabis.
Abameli abanolwazi olwanele kulo mkhakha bangasiza ngokulamula nokulamula lapho kuvela izingxabano zenkontileka. Lapho unommeli onolwazi ngawe, ungavikela wonke amalayisense webhizinisi lakho nezinye izimpahla ezingaba sengozini ecaleni kwengxabano yenkontileka.
Noma kungekho zingxabano, kunezinkinga eziningi zokulawula ezixazululwa ngabanini bamabhizinisi ngezikhathi ezithile. Ummeli usiza ekunikezeni inkombandlela yokuthi kufanele enzeni ukulandela umthetho ngaso sonke isikhathi.
Ngingummeli uThomas Howard, futhi ngisebenza nethimba labameli abawazi kahle embonini ye-cannabis. Inkampani yethu isekelwe ePeoria, e-Illinois, lapho sinikeza khona isiqondiso nezeluleko zomthetho, kanye nokusiza abantu bebhizinisi ukusungula ukungena kwe-cannabis embusweni. Uma udinga ummeli endaweni yasePeoria, thintana nathi, futhi sizojabula ukusiza.
Kunezizathu eziningi zokuthi kungani kufanele usebenze nenkampani yethu. Komunye, siyayazi indlela yokulwa ne-smart futhi sivikele amabhizinisi amakhasimende ethu kanye namafa. Siqonda ngokuphelele imboni ye-cannabis futhi sazi ukuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzithathe lapho udinga ukumelwa.
Okungcono kakhulu, sineminyaka eminingana yesipiliyoni. Inkampani yethu ibilokhu isebenza isikhashana, futhi sisingathe ngempumelelo izingxabano zenkontileka ye-cannabis phambilini. Siphinde sabhekana nezingxabano zezindlu ze-cannabis, ukumangalelwa enkantolo kanye nokulamula kwangasese.
Siyaqonda zonke izidingo ze-cannabis njengoba kushiwo ngumthetho ukukusiza ukuvikela ibhizinisi lakho. Siyazi nokuthi kufanele wenzeni lapho izingxabano zabalingani zibeka ibhizinisi oye walwa nalo ekwakheni engcupheni.
Noma ngabe iyiphi indawo okhathazeka ngayo, wamukelekile ukukhuluma nathi, futhi sizokusiza ukuthi uhlaziye izinketho zakho ngenkathi uqinisekisa ukuthi uyaqhubeka nokusebenza ngokulandela umthetho.